Ny kaontiko - NYE Countdown.com
NY NY Countdown
Miorina amin'ny fanavaozana 34
Tena mahafinaritra! Avy amin'ny famokarana feo sy horonan-tsarimihetsika tonga lafatra ho an'ny fanarahana sy ny serivisy mpanjifa aorian'ny varotra... famelombelona mahatsikaiky. Amin'ny maha-DJ vanona azy dia midika izany fa izao tontolo izao dia manana NYECOUNTDOWN.com ho loharano GO-TO.hamaky bebe kokoa
NYE Countdown dia mahafinaritra !!!! Ny serivisy sy ny kalitao dia tsy amin'ity tontolo ity. Izy ireo dia tena manampy ary tena... matihanina sy haingana. Hanao asa betsaka kokoa amin'izy ireo aho .... Tazano ny NY FAHAFAHANA mahatalanjonahamaky bebe kokoa
Asa tsara kalitao !! Serivisy mpanjifa ambony. Fifandraisana tsara. Ny fifandraisana tsara indrindra. Hiverina amin'izy ireo indray... misimisy kokoa i Dj mandatsaka / Ids (Intros).hamaky bebe kokoa
23:59 27 Mey 20
Fanaterana tena haingana, ary ny fahatongavan'ny matihanina dia nilatsaka. Mila bebe kokoa aho. Bandy tsara gasy e!
11:33 27 Mey 20
Ny resaka navaly dia haingana be. Niavaka ny serivisy mpanjifa ary tonga lafatra ny Drop nataoko. Tena manana a... mpanjifa vaovao ato amiko.hamaky bebe kokoa
18:33 15 Mey 20
Latsaka amin'ny kalitao tsara. fifandraisana mahafinaritra amin'ny serivisy mpanjifa. Izy ireo dia mihaino ary mahazo ny tianao ary ianao... mitady, ho DJ tsy fantatro hoe aiza no hitondrako, fa izao kosa no fantatro hoe aiza no handeha. Misaotra.hamaky bebe kokoa
17:29 11 Mey 20
Nandidy kojako 4 mitete aho ary mazoto! Jasmin dia faly mifandraika hiara-miasa. Nataony izay hahazoako antoka fa voaray tsara aho... ilaina / tiany. Misaotra anao, Jasmin!hamaky bebe kokoa
03:32 09 Mey 20
Serivisy kilasy voalohany ... Ny baiko jingles ary napetrany tao anatin'ny 1 ora ... Tsara be tamin'i Storm sy Jasmin ary daholo... ny ekipa ... 👍🙂hamaky bebe kokoa